Mgbe Malls ghọrọ Datacenters ... | Martech Zone
Nyaahụ bụ oké ụbọchị na Egwuregwu Bean. Patric kwụsịrị site na Noobie, Doug Theis si Ihe eji arụ ọrụ ndụ na mgbe e mesịrị na ụbọchị, Adam si Text Site Arịrịọ.
Ndụ Datacenters nwere ezigbo oyi, na ịkwa emo, akụkọ na ụlọ ọrụ Eastgate Mall ọhụrụ ha. Akwụkwọ akụkọ Indianapolis Business Journal mere akụkọ na ha mgbe ha mechara zụọ ahụ, mana ugbu a ụlọ ọrụ ahụ na-abịazi ndụ. Ọ bụ datacenter zuru ezu na mgbịrịgba na mkpọrọhịhị ọ bụla, ekwenyere m na naanị Tier IV na Indianapolis - yana nke kachasị ukwuu na midwest.
Foto si DeadMalls.com.
E wuru Eastgate Mall na 50 ma nwee ọganihu site na 70. Ọ bụ na eze nwụrụ mgbe afọ 50 gasịrị nke ọrụ. N'ịbụ nke e wuru na elu nke mgbidi Nuke na USSR, ụfọdụ n'ime nnukwu ụlọ ahịa ahụ nwere bonka ala ndị e wuru site na ụtụ isi gọọmentị n'oge ahụ. Yabụ - lee ị nwere ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ eserese square, ịnweta okporo ụzọ, ike ntanetị ọtụtụ, igwe na-enye ọkụ, jụrụ oyi, ebe nchekwa bọmbụ… na ụlọ ahịa ahụ nwụrụ.
Kedu ihe ị ga-eji nnukwu ụlọ ahịa eme?
Mee datacenter n'ime ya, n'ezie! Amaghị m onye nwere ọhụụ mbụ maka ọrụ a, mana ọ na-egbuke egbuke - na ịkwa emo. Ugbu a nnukwu akụkụ nke mkpọsa na-agagharị na ntanetị, olee otu o si dị mma na a gbanwere nnukwu ụlọ ahịa na datacenter? Ọ bụ ihe kacha eju eju n’akwụkwọ m! Eastgate nwere ike mechie ọnụ ụzọ ya maka ụkwụ ụkwụ afọ ole na ole gara aga, mana o nwere ohere ịkpọlite ​​n'ọnwụ n'ime otu nnukwu 'ahịa' kachasị na mba ahụ!
Aga m anwa ịtọlite ​​oge iji soro Doug mee njem na izu na-abịa ma ọ bụ karịa. Apụghị m ichere ịhụ ihe ha rụzuru!
Tags: nnukwu ụlọ ahịa ọwụwa anyanwụebe nchekwa data ndu
Usoro kachasị mma maka itolite Blog gị
Jun 29, 2008 na 6:50 AM
Karma nke nnukwu ụlọ ahịa bụ ịmaliteghachi ụwa dịka ebe data… ọ nwere uche. Nke a bụ ihe anyị nwere ike ịkpọ "e-budism"?
Jun 29, 2008 na 8:39 AM
Ahụrụ m iko Bean n'anya ma soro gị na-ekwurịta okwu Doug. Anyị kwesịrị ịdị na-eme nke ahụ ọtụtụ mgbe. Ma gụọ m mgbe ị gara njem nke (nke ọzọ) Doug ọhụrụ data center!
Jun 29, 2008 na 10:50 AM
Ekwenyere m na e-budism.
Ma ọ bụ e-vana.
Nke ahụ dị egwu banyere nnukwu ụlọ ahịa! Amaghị m na Doug banyere n'ụdị ihe a. Nke ahụ dị egwu!
Daalụ maka nnabata, Doug. Enwere m ọ Patụ na gị na Patric na ndị ọrụ Bean Cup na-akparịta ụka ụnyaahụ. Anyị ga-eme njem nke Eastgate haziri maka gị.